Koreanlanguage – THE CHAN EDUCATION
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ချစ်တဲ့အကြောင်း ကိုရီးယားလိုပြောမယ်
06/06/2018 By The Chan
အချစ်ဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ အချစ်ရဲ့အစွမ်းဟာ နက်နဲလှပြီး၊ လူရဲ့စိတ်ကိုပါ ပြောင်းလဲနိူင်တယ်။ တခြားသူရဲ့ နှလုံးသားကိုရချင်ရင် ချစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြပါဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကျနော်တို့လည်ူ ကိုယ်ရချင်တာ၊ လိုချင်တာတွေကို အချစ်စကားလုံးတွေနဲ့ ချူပ်ရအောင်… အချစ်ကို ဖော်ပြတဲ့ စကားလုံးတိုင်းဟာ ချိူသာလို့ လူတွေ ကြားသင့်တဲ့ အရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာကို ကြည့်ရအောင်…. 사랑 – အချစ်Read More
04/27/2018 By The Chan
하다- လုပ်သည် 다니다- တက်ရောက်သည် 하교 – ကျောင်း 교회- ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း 사장님- သူဌေး 선배님- စီနီယာ 형님- အစ်ကိုကြီး 동생- ညီလေး 여동생- ညီမလေး 남동생- ညီလေး (ယောကျားလေး ညီလေး) 교수님- ပါမောကခRead More
04/23/2018 By The Chan
가다- သွားသည်။ 가고 싶다 -သွားချင်သည် 갈것이 없다- သွားစရာမရှိသည်။ 갔다오다- သွားပြီနောက် ပြန်လာသည်။ 가르치다- သင်ပြသည်။ 가치- တန်းဖိုး 같다- အတူတကွ 가깝다- နီးသော 오다 -လာသည်။ 오는길- လာရာလမ်း 비 –Read More
04/18/2018 By The Chan
ကိုရီးယား ဈေးဝယ် ထွက်ရင် အင်္ဂလိပ်လို နိူင်ငံခြားပါ ဆိုပြီ လှျှောက်သုံးလို့ မရဘုး။ ကိုရီးစာမှ ကိုရီးစာကို သုံးလို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအနီးနားမှာ ဘာဈေးရှိတာလဲ။ 여기 옆에 시장이 있어요? ဟိုနားမှာ ဈေးရှိတယ် 거기에 있습니다. အတူတူသွားရအောင်… ငါလည်း ၀ယ်စရာရှိတယ်။ 같이 갑시 다. 나도 사야겠어요.Read More
03/10/2018 By The Chan